“ဆရာ . . . သားမနက်ဖြန် (၁၀)နာရီလေယာဉ်နဲ့ ထွက်ရမယ်ဆရာ။ အဲ့ဒါ . .ဟို။
ဆရာ လေယာဉ်ကွင်းကို လာဖို့အဆင်ပြေမလားလို့ . .သား ဖုန်းဆက်ကြည့်တာ”
“အေး . . .ကျော်ကိုလတ်လား။ မနက်ဖြန် . .အင်း မနက်ဖြန်ဆိုရင် ဆရာအဆင်မပြေဘူးကွ။ ဆရာသွား စရာရှိတယ်။ သူရလေကွာ။ မင်းသိတယ်မလား။ မင်းတို့နှစ်ကပဲ ဆယ်တန်းအောင်သွားတဲ့ သူရမင်းထွဋ်။ အေး သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကွာ။ မနက်ကတည်းက ဆရာ့ကို လာကြိုမယ်ဆိုပြီး ဖိတ်ထားလို့။ ဆရာသွားရမယ်”
“သြော် . . .ဟုတ်ကဲ့ဆရာ . .အဲ့ဒါဆိုရင် . .သားနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆရာ”
“အေး . . .အေး”
ကျွန်တော့်ရဲ့ တပည့်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ ကျော်ကိုလတ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားဆီက ဖုန်းဆက်လာတော့ ညဦးပိုင်း ၁၀ နာရီမို့၊ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော်က အဲ့ဒီအချိန်ဘီယာဆိုင်မှာ။ “ငါ့တပည့်တစ်ယောက်၊ မနက်ဖြန်မလေးရှား ထွက်ပြီး အလုပ်သွားလုပ်မှာမို့ ငါ့ဆီဖုန်းဆက်တာ” လို့ သူငယ်ချင်းတွေကိုပြောလိုက်ပေမယ့် ပြောပြီးတော့ လည်း ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်။ အရင်ကတည်းကတော့ ကျွန်တော့်တပည့် မလေးရှားထွက်ပြီး အလုပ်သွားလုပ်မယ် ဆိုတာ သိတော့ သိနေသား။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်မြန်မြန်ကြီးထွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ ကျွန်တော်မထင်ခဲ့။
“ဒီနှစ်က အဆင်မပြေဘူးဆရာရဲ့။ သားလည်းတက်္ကသိုလ်ဆက်မတက်ချင်တော့ဘူး ဆရာ။ အိမ်က စိုက်ခင်းတွေလည်း ပိုးကျသလို၊ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ၀က်ပေါက်စလေးတွေနဲ့၊ ၀က်သားအမိတစ်အုပ်လုံးကလည်း နေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်ဆရာ။ ၀က်နားရွက်ပြာရောဂါတွေ ဘာတွေလားတော့ မသိပေမယ့် နေမကောင်းတဲ့ ၀က်သားအမိတစ်အုပ်လုံးကို ဈေးချပြီး ရောင်းလိုက်ရတယ်လေ။ သားတို့အိမ်စီးပွားရေးကြောင့် သားလည်း မလေးရှားသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ”
ဟိုတစ်လောလေးကမှ ကျွန်တော့်စာသင်ခန်းကို ရောက်လာပြီးပြောတဲ့ ကျော်ကိုလတ်ရဲ့စကားသံတွေကို ပြန်ကြားယောင်မိတယ်။ ဒီစကားတွေကြားရတာ လွန်ရောကျွံရော တစ်လလောက်ပဲ ရှိဦးမှာပါ။ အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်တော်ကလည်း စာသင်နေရင်းတန်းလန်းမို့ တပည့်ဟောင်းကျော်ကိုလတ်ကို စကားတောင်သိပ်ပြီး ပြောဖြစ် လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။
“ဟ .. .မင်းက မလေးသွားပြီး အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ မင်းအသက်၊ မင်းပညာနဲ့ ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ။ အခြားနည်းလေးဘာလေးကြံပါလား”
“အခြားနည်းလည်းမရှိတော့ဘူးဆရာ။ ဟိုမှာက သားရဲ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲတွေလည်းရှိတော့ အဆင်ပြေမှာပါ။ အလုပ်ကတော့ အလုပ်ကြမ်းပေါ့ဆရာရယ်။ သားက စိုက်ခင်းထဲမှာ အပင်စိုက်လာတဲ့ ကောင်ပဲ။ ဒီလောက်တော့ ဖြစ်ပါတယ်။”
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်ကမှ ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကို ကျွန်တော်ပြန်ကြားယောင်မိပေမယ့် သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့နေတဲ့အချိန်မို့ စကားတွေက အာရုံထဲမှာခဏပါပဲ။ မနက်ဖြန်ဆိုတဲ့ ရက်က ကျွန်တော်တစ်ကယ် မအား။ ကျွန်တော့်တပည့်နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူရမင်းထွဋ်ဆိုတဲ့ တပည့်က သူ့ရဲ့မွေးနေ့မို့ ကျွန်တော့်ကို ကားနဲ့လာခေါ်မယ်လို့ ဖိတ်ထားပြီးသား။ ကျွန်တော်မသွားလို့က ဘယ်လိုမှမဖြစ်။ သူရမင်းထွဋ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်က သူ့အဖေဦးမင်းထွဋ်နဲ့ပါ ရင်းနှီးနေတာလေ။ ပြီးတော့ ဦးမင်းထွဋ်ဆိုတာက ကျွန်တော်ဝိုင်းကျူရှင်သင် ဖို့ တိုက်ခန်းကအစ၊ အစစအရာရာ ကူညီစီစဉ်ပေးသူ။
“ဟေ့ကောင် . .. မင်းအရင်တစ်ခါပြောတဲ့ စင်ကာပူမှာ ကျောင်းသွားတက်မယ်ဆိုတဲ့ တပည့်ကရော . .သွားပြီလား”
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော်တွေးနေတဲ့ အတွေးတွေရဲ့ နောက်မှာကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က စကားစလာတယ်။
“မဟုတ်ဘူးကွ။ အဲ့ဒီတစ်ယောက်က သူရမင်းထွဋ်။ သင်္ဘောသားနဲ့ ဆရာဝန်မရဲ့သား။ ဒီတစ်ယောက်က ငါတို့ဝေဇယန္တာလမ်း ဟိုဘက်ခြမ်းက စိုက်ခင်းထဲက ကျော်ကိုလတ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါ” လို့ ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းကို သေသေချာချာ ခွဲခြားပြောလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်တပည့်နှစ်ယောက်ရဲ့ ကိစ်္စကလည်း ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကနေ ခွာထွက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အခြားစကားတွေနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းကပြန်ပြီး စည်ကား သွားတယ်။ မလေးရှားကိုသွားမယ်ကျော်ကိုလတ်ရဲ့ မနက်ဖြန်၊ မွေးနေ့ပွဲကျင်းပမယ့် သူရမင်းထွဋ်ရဲ့ မနက်ဖြန်တို့ ကလည်း ကျွန်တော့်အာရုံကနေ ဖယ်ခွာသွားကြတယ်လေ။
ကျွန်တော်တို့ ဘီယာဆိုင်ထိုင်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း နာရီပြန်တစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှ ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်း တွေနဲ့လမ်းခွဲပြီး ၅ လွှာမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းကို တစ်ယောက်တည်း တက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ အသင်းတိုက်မှာရှိတဲ့ ဝေဇယန္တာအိမ်ယာတိုက်ခန်းတွေက လှေကားဝမှာ သံပန်းတံခါးတစ်ထပ်၊ ပြီးမှတိုက်ခန်းကို ဖွင့်ဝင်ရတဲ့ တံခါးကတစ်ထပ်မို့ ဗြုန်းကနဲကြည့်လိုက်ရင် အပြင်သံပန်းတံခါးက ခြံစည်းရိုးတံခါးနဲ့ တူနေတယ်။
ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းတက်လာရင်း လှေကားရင်းက အပြင်သံပန်းတံခါးကိုရောက်တယ်။ မီးလေး မှိန်ပြပြကို အားကိုးရင်း သံပန်းတံခါးက သော့ကိုဖွင့်ဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်။ အဲ့ဒီမှာတင် သံပန်းတံခါးမှာ ချိတ်ထားတဲ့ တစ်စုံတစ်ခုကို ကျွန်တော်သွားစမ်းမိတယ်။
“ဟာ . .ကျော်ကိုလတ်”
တစ်စုံတစ်ခုကိုစမ်းရင်း ကျွန်တော့်နှုတ်က လွှတ်ကနဲထွက်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ ကန်စွန်းရွက်နှစ်စည်းကို ကျွန်တော်ကိုင်ရင်း တိုက်ခန်းထဲကို ၀င်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော် ဒီတိုက်ခန်းကို မရောက်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်က သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ဝေဇယန်္တာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့်အစ်ကိုပိုင်တဲ့ အိမ်အိုကြီးတစ်လုံးမှာ ကျွန်တော်ကျူရှင်စဖွင့်တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မဟာသိပ်္ပံဘွဲ့ ရပြီး အလုပ်လက်မဲ့ယောင်ခြောက်ဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရင်းနှီးတဲ့ အထက်တန်းပြဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းပြီး ကျွန်တော်က အိမ်အိုအိုကြီးမှာ ကျူရှင်ဝိုင်းကို စတင်ခဲ့တာ။
ကျူရှင်ဝိုင်းက ဝေဇယန်္တာလမ်းမပေါ်မှာ ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် အိမ်ကတော်တော်ဆိုပြီး စုတ်ချာနေတော့ ကျူရှင်ဝိုင်းသာ ဖွင့်ဖြစ်တယ်။ ကျောင်းသားတွေက တော်တော်နဲ့ရောက်မလာသေး။ ဒါတောင် အဲ့ဒီနားမှာ သင်္ဃန်းကျွန်း အထက (၂)ကြီးရှိသလို၊ ကျွန်တော်နဲ့တွဲပြီး သင်မယ့် ဆရာမက အဲ့ဒီကျောင်းက။ ဒါပေမယ့် သင့်မယ့် ဆရာကျွန်တော်က စာသင်သက်အတော်နည်းသေးတဲ့ ဆရာပျိုပျို၊ သင်မယ့်နေရာက ခနော်နီခနော်နဲ့ အိမ်အိုအိုဆိုတော့ တက်မယ့် ကျောင်းသားဆိုတာကလည်း နတ်္ထိပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း မကြာခင်မှာ ကျော်ကိုလတ် အပါအ၀င် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၆) ယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ကျော်ကိုလတ်တို့က (၉)တန်းကျောင်းသားတွေ။
“ငါ့မောင်ရေ . . .ငါတို့တော့ ကျောင်းသားရပြီ။ ဒီကလေးတွေ စာတော့မတော်ကြဘူး။ အားလုံးက နယ်ကချည်းပဲ။ ငါတို့ဒီလမ်းဟိုဘက်က စိုက်ခင်းထဲက ကလေးတွေလေ။ သူတို့က ကျောင်းစတက်တာလည်း နောက်ကျတော့ ၀င်စရာကျူရှင်ဝိုင်းကလည်း မရှိဘူးလေ။ ငါတို့လည်း သူတို့တွေနဲ့ပဲ ကျူရှင်ဝိုင်းကို စလိုက်ကြရအောင်။ သူတို့မိဘတွေကလည်း စိုက်ခင်းထဲကဆိုတော့ နင်သိတဲ့အတိုင်းလေ။ အဆင်ပြေသလောက် ကျူရှင်ခနဲ့ပဲ သင်လိုက်ကြတာပေါ့ဟယ်”
ဒီလိုနဲ့တောင်ပံကျိုးလုကျိုးခင်ဖြစ်နေတဲ့ ဆက်ရက်တွေနဲ့ ခံတွင်းမပျက်တစ်ပျက်ကြောင်တွေတွေ့ခဲ့ကြ တယ်။ တကယ်တော့ စုစုပေါင်းကျောင်းသူ (၆)ယောက်မှာ ကျောင်းသားက သုံးယောက်၊ ကျောင်းသူက သုံး ယောက်။ ပုံစံတွေက မတူသလို၊ စိတ်ဓာတ်တွေကလည်း မတူညီကြ။
“ရိုးသားတယ်။ ကြိုးစားတယ်။ အလိုက်တော့မသိဘူး” ဆိုတဲ့ နယ်က ကလေးတွေရဲ့ထုံးစံတစ်ယောက် တစ်မျိုးစီနဲ့ သံစုံမြည်နေတာက ဟစ်ဟော့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လိုပဲ။ စုစုပေါင်း ခြောက်ယောက်မှာ နှစ်ယောက်က ခရမ်းသုံးခွ ဘက်က။ သုံးယောက်က မုံရွာခရိုင်အရာတော်ဘက်က၊ ကျော်ကိုလတ်ကျတော့ ဇလွန်က။ ပြောဟန်၊ ဆိုဟန်တွေ ကလည်း လေယူလေသိမ်းတွေမတူကြ။ မုံရွာသုံးယောက်က ကျွန်တော်တို့ဆရာ ဆရာမတွေကိုလည်း ခင်ဗျားတွေ ကျုပ်တွေနဲ့ နှုတ်ကျိုးနေတာမို့ ဘယ်လိုမှ သင်ယူလို့မရ။ သူတို့ခြောက်ယောက်မှာ တူညီတဲ့အချက်တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဝေဇယန်္တာလမ်းမဘေးက စိုက်ခင်းလေးတွေမှာ တဲလေးတွေထိုးပြီး အသီးအနှံမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးကြတာလေ။
“ဟေ့ကောင် ကျော်ကိုလတ် . . .မင်းက မင်းအိမ်က လူတွေနဲ့ မနက်ပိုင်းမှာ ဈေးသွားဝိုင်းရောင်းတယ်ဆိုတော့ ရန်ကုန်ဈေးသည်တွေလိုပဲ အော်ဟစ်ရောင်းရတာပဲလား”
“အေးပေါ့ကွ။ ဈေးထဲမှာ အော်မရောင်းရင် ငုတ်တုတ်မေ့နေမှာပေါ့။ ချဉ်ပေါင်တွေ၊ ကန်စွန်းတွေ၊ ကင်ပွန်းတွေဆိုပြီး ခုနှစ်သံချီနဲ့ ဟစ်နိုင်မှတန်ကာကျတာ”
စာသင်နားတဲ့အချိန်မှာ ကျောင်းသားအချင်းချင်းပြောနေကြတဲ့ အသံတွေကိုကြားနေရတယ်။ သူတို့ဘ၀ လေးတွေထဲကို တိုးမ၀င်ပါဘဲနဲ့ သူတို့ဘ၀လေးတွေက အလိုလိုကျွန်တော့်နားထဲကိုရောက်လာကြတာလေ။ စိုက်ခင်းထဲက ကလေးတွေကို စာသင်တော့ ရာသီပေါ်အသီးအနှံတွေက စားလို့မကုန်အောင် ကျွန်တော့်ဆီကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ ဈေးထဲမှာ “ချဉ်ပေါင်တွေ၊ ကန်စွန်းတွေ၊ ကင်ပွန်းတွေ” လို့ အော်ရောင်းတတ်တဲ့ ကျော်ကိုလတ် ယူယူလာတဲ့ ချဉ်ပေါင်တွေ၊ ကန်စွန်းတွေဆိုတာကပဲ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ဘယ်လိုမှ စားမကုန်နိုင်ခဲ့။
“ဆရာ . .အရွက်များများစားပါဆရာရဲ့။ ဆရာ့ကြည့်ရတာ ဗိုက်ကတစ်နေ့ တစ်ခြားပူပူလာပြီး အဆီပိတ်လာသလိုပဲ။ ကန်စွန်းရွက်တွေ သားနေ့တိုင်းယူလာခဲ့မယ်”
ပြောလည်းပြောသလို၊ ပြောတဲ့အတိုင်းလည်း ကန်စွန်းရွက်တွေကို ကျော်ကိုလတ်ကအမြဲတမ်းယူလာတတ် တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျော်ကိုလတ်တို့ ဆယ်တန်းနှစ်အရောက်မှာတော့ ကျွန်တော်က သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ဝေဇယန်္တာ အိမ်ယာရဲ့တိုက်ခန်းပေါ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။
တိုက်ခန်းပေါ်ရောက်တာကလည်း ကျော်ကိုလတ်တို့ ဆယ်တန်းနှစ်မှာ ကျွန်တော်က ဗဟန်းမှာရှိတဲ့ နောက်ထပ် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကွိုကငိန သီးသန့်ဝင်ပေးရတယ်။ ဒဂုံ (၁)က ကျောင်းအုပ်ကြီးက ကျွန်တော့်ဆရာမို့ ကျွန်တော်က သူရမင်းထွဋ်ဆိုတဲ့ ဒဂုံ (၁)ကျောင်းသားကို သူ့အိမ်မှာသွားပြီး စာသင်ခွင့်ရခဲ့ တယ်။ တစ်ယောက်တည်းကို သင်ရတာဆိုပေမယ့် ဒီခြောက်ယောက်ကို သင်ရတဲ့နှုန်းထားထက် ၂ ဆလောက် လည်း လခကပိုရသေးတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီကျောင်းသားရဲ့ မိဘတွေက သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ဝေဇယန်္တာအိမ်ယာမှာ တိုက်ခန်းရှိတာမို့ သူတို့က ကျူရှင်ခန်းဖွင့်လို့ရအောင် အဲ့ဒီတိုက်ခန်းကို ကျွန်တော့်ကို အလကားပေးနေတယ်။
တိုက်ခန်းပေါ်ရောက်ပြီး တိုက်ခန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ်္စည်းတွေကိုလည်း ၀ယ်ပေးကြ တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အိမ်အိုကြီးပေါ်ကနေ တိုက်ခန်းအသစ်လေးပေါ်ရောက်ခဲ့ပြီ။ တိုက်ခန်းအသစ်လေးမှာ နောက်ထပ်၊ နောက်ထပ်သော ကျောင်းသားအသစ်လေးတွေလည်း ရောက်လာကြပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းသား အသစ်တွေနဲ့ ကျော်ကိုလတ်တို့ (၆)ယောက်ကိုတော့ရောထားလို့မဖြစ်။
“သူတို့တွေကတော့ ခွဲထားမှရမှာလေ။ နောက်ထပ်အသစ်တွေနဲ့ရောရင် သူတို့တွေစာမလိုက်နိုင်မှာ စိုးရတယ်။ သူတို့ကတော့ ကန်စွန်းရွက်အဖွဲ့ပေါ့ဟယ်”
ဆရာမက ရယ်ပြီးပြောခဲ့ပေမယ့် တကယ်တန်းကလေးတွေ နောက်ကွယ်မှာ ကျော်ကိုလတ်တို့အဖွဲ့ကို ကျွန်တော်တို့က ကန်စွန်းရွက်အဖွဲ့လို့ပဲ နာမည်တပ်ပြီးပြောဖြစ်ကြတယ်။ တိုက်ခန်းအသစ်မှာ ကျောင်းသားအသစ် တွေပေးလာတဲ့ စားစရာ၊ သောက်စရာ နိုင်ငံခြားဖြစ် လက်ဆောင်မုန့်မျိုးစုံကြားမှာ ကျော်ကိုလတ်ရဲ့ကန်စွန်းရွက် စည်းလေးတွေကတော့ အမြဲတမ်းရှိနေတာပါပဲ။ တိုက်ခန်းမှာ ကျွန်တော်နဲ့ညပိုင်း စာလာကျက်ရင်း အတူလာနေတဲ့ ကျော်ကိုလတ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျော်လွန်လို့ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်နောက်ကျရင်လည်း မအိပ်ဘဲ အမြဲတမ်း စောင့်နေတတ်တာပါပဲ။ သူရမင်းထွဋ်တို့အိမ်က အမြဲတမ်းလက်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့ ချောကလက်တွေကြားမှာ မစားဖြစ်ဘဲ ညှိုးရော်ကုန်တဲ့ ကျော်ကိုလတ်ရဲ့ကန်စွန်းရွက်စည်းလေးတွေက အမြဲတမ်းရှိနေတာပါပဲ။
ဆယ်တန်းတွေအောင်စာရင်းထွက်တော့ ကျွန်တော်ွကငိန လုပ်ရတဲ့ သူရမင်းထွဋ်က ဂုဏ်ထူးလေးဘာ သာနဲ့အောင်ပြီး ဆေးတက်္ကသိုလ်ဝင်လို့ ကျော်ကိုလတ်ကတော့ ရိုးရိုးလေးပဲ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ သူရမင်းထွဋ် ဂုဏ်ထူးတွေဝေဆာစွာနဲ့အောင်တော့ အောင်စာရင်းထွက်တဲ့နေ့မှာပဲ သူရမင်းထွဋ်ရဲ့ အဖေဦးမင်းထွဋ်ကကျွန်တော့် ကို ကားနဲ့လာခေါ်ပြီး အသုံးအဆောင်ပစ်္စည်းအစုံအလင်နဲ့ သူရမင်းထွဋ်က ကျွန်တော့်ကို ကန်တော့ခဲ့သလို အိမ်မှာထမင်းကျွေးလို့ အားမရဘဲ ဘီယာသောက်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဘီယာဆိုင်ကိုခေါ်ပြီး ပြုစုပြန်တယ်။ အဲ့ဒီညက ကျွန်တော်လည်း အတော်မူးနေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တိုက်ခန်းကိုရောက်တော့ ညတစ်နာရီကျော်ပြီ။ ကိုမင်းထွဋ်ကတော့ ကျွန်တော့်ကိုတိုက်ခန်းအောက်ထိ လိုက်ပို့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူရမင်းထွဋ် ကန်တော့ လိုက်တဲ့ အင်္ကျီ၊ ပုဆိုး၊ မုန့်ပုံး၊ ချောကလက်ဗူးတွေအပါအ၀င် စားစရာသောက်စရာတွေကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ မနိုင်မနင်းသယ်ရင်း၊ တိုက်ခန်းပေါ်ကို တက်လာတယ်။ အဲ့ဒီမှာတင် တိုက်ခန်းဝ သံတံခါးကိုငုတ်တုပ်မှီ၊ ကန်စွန်း ရွက်စည်းတွေကိုင်ပြီး အိပ်ငိုက်နေတဲ့ ကျော်ကိုလတ်ကို ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာ။ ကျောင်းတွေပိတ်ကတည်းက ကျော်ကိုလတ်က သူ့အိမ်ကိုပြန်သွားတာမို့ သော့က သူ့မှာရှိမနေတော့ဘူးလေ။ ကန်စွန်းရွက်စည်းတွေကိုင်ထား တဲ့ ကျော်ကိုလတ်ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ဘာကို မကျေနပ်မှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။
“မင်းကွာ . .ဒီအချိန်ကြီးတိုက်ခန်းရှေ့မှာစောင့်နေရလား . . လာလာ အထဲဝင်”
မူးနေတာမို့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က စကားတွေက တစ်လုံးချင်းထွက်လာတယ်။
“ဒီနေ့အောင် စာရင်းထွက်တဲ့နေ့မို့ ဆရာ့ကိုကန်တော့ချင်တာနဲ့ သားစောင့်နေတာ”
တိုက်ခန်းထဲရောက်တော့ ကျော်ကိုလတ်က ပြောပြောဆိုဆို ကန်စွန်းရွက်စည်းတွေဘေးချပြီး ကုန်းကန် တော့တယ်။ သူရမင်းထွဋ်ကန်တော့လိုက်တဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် နှစ်ထုပ်ကိုတစ်လှည့်၊ ကျော်ကိုလတ်ယူလာတဲ့ ကန်စွန်းရွက်စည်းတွေကို တစ်လှည့်ကြည့်ရင်း ကျွန်တော်ဒေါသတွေ အလိပ်လိုက် တတ်လာခဲ့တယ်။ ဆရာတစ်ယာက်ရဲ့ တန်ဖိုး။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နှစ်ထုပ်ရဲ့တန်ဖိုး။ ကန်စွန်းစည်းတွေရဲ့ တန်ဖိုး။ တန်ဖိုးတွေရဲ့အလဲအထပ် ကိန်းကို အယ်ကိုဟောအရှိန်နဲ့ရီဝေနေတဲ့ ကျွန်တော့်အသိဥာဏ်က တွက်ချက်နေတယ်။
“မင်းကွာ . .ငါ့ကို ဒီကန်စွန်းစည်းတွေလောက်ပဲ တန်ဖိုးထားရသလား”
“ဗျာ . .ဆရာ”
“မင်းတို့ကွာ . .ငါ့ဆီမှာစာ စသင်ကတည်းက ငါတို့ဘက်က ကျူရှင်လခကအစ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်မယူခဲ့ဘူး။ ကိုးတန်းတစ်နှစ်၊ ဆယ်တန်းတစ်နှစ်၊ စုစုပေါင်း နှစ်နှစ်။ မြို့ကလေးတွေနဲ့ တောကလေးတွေကွာတယ်ဆိုတာ ဒါပဲ။ မင်းတို့ဆရာမပြောဖူးတဲ့ ရိုးသားတယ်။ ကြိုးစားတယ်။ အလိုက်မသိဘူးဆိုတာ အဲဒါပဲ။ မင်းတို့ရဲ့သိတတ်မှုက ကန်စွန်းရွက်တွေလားကွ”
ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ဘာတွေတရစပ်ထွက်နေမှန်းတော့ ကျွန်တော်အတိအကျမသိခဲ့ပါ။ အထက်ပါ စကား တွေအတိုင်းထွက်ခဲ့တယ်လို့တော့ ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်အတော်မူးနေတာ ပြောပြီးပြီးချင်းလည်း ကျွန်တော်က အိပ်ပျော်သွားတယ်။ နောက်နေ့မနက် ကျွန်တော်အိပ်ယာနိုးတဲ့အချိန်က ဆယ်နာရီခွဲပြီမို့ ကျော်ကို လတ်က မရှိတော့။ ညကပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ပြောမိတာလား။ မပြောမိတာလား ဝေကွဲမရ စဉ်းစားရခက်နေ တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်ကစာသင်တဲ့ ၀ှိုက်ဘုတ်မှာ ကျော်ကိုလတ်ရေးသွားတဲ့ စာတွေကိုတွေ့ခဲ့တာ။
“ကန်စွန်းရွက်တွေက ကြာရင်ရော်ပြီး ကြွေတတ်သလို ချောကလက်တွေလည်း မှိုတက်တတ်ပါ တယ်ဆရာ” တဲ့။
တိုက်ခန်းဝမှာချိတ်ထားတဲ့ ကန်စွန်းနှစ်စီးကိုကိုင်ရင်း ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းတွေးနေလိုက်တာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ်တောင်မသိ။ ကျော်ကိုလတ်တို့ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်တဲ့နေ့က ဒီလို ကန်စွန်းစည်းတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုလာကန်တော့တုန်း ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကို ပြန်သတိရလာတယ်။ ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပေမယ့် ကျွန်တော့်စကားရဲ့အတိမ်အနက်ကို မှန်းဆလို့မရလို့လား။ ကျွန်တော်ဘာပြောပြော ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိလို့ပဲလားတော့ မသိ။ ကျွန်တော့်ဆီကို ကန်စွန်းစည်းတွေနဲ့ ကျော်ကိုလတ်ကတော့ နောက်ထပ် လည်းလာမြဲလာဆဲပါပဲ။ အခုလို မလေးရှားသွားမယ့် ကိစ်္စတွေရှုပ်နေတဲ့အချိန်အထိ ကျွန်တော့်ဆီကို ကန်စွန်း စည်းတွေကတော့ ရောက်မြဲပါပဲ။
ကျွန်တော့်ကိုဖုန်းဆက်တော့ ကျွန်တော်လေယာဉ်ကွင်းကိုလိုက်မပို့နိုင်တဲ့ အကြောင်းပြောရင်း သူရမင်းထွဋ် ရဲ့မွေးနေ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်မဆီမဆိုင် ဘာလို့ထည့်ပြောမိခဲ့ပါလိမ့်။
မွေးနေ့ပွဲကို ခမ်းနားစွာ ကျင်းပမယ့် တပည့်ရဲ့မနက်ဖြန်ဘ၀ခရီး၊ နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေး ဖြေရှင်းရမယ့် တပည့်ရဲ့မနက်ဖြန်ဘ၀ခရီး။ မနက်ဖြန်တို့ရဲ့ ဘ၀ခရီးနှစ်ခုကြားမှာ ခြားနားမှုတွေနဲ့ ပြည့်သိပ်နေတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် . . .။ ကျွန်တော်က ချောကလက်တွေကိုပဲ မွတ်သိပ်စွာ တမ်းတနေဖြစ်တာလား။
ဖျတ်ကနဲ အတွေးမှာလက်ထဲက ကန်စွန်းနှစ်စီးဟာ ပြုတ်ကျလုမတက်ဖြစ်သွားတယ်။ နောက်ဆိုရင် ဒီလိုကန်စွန်းစည်းတွေ ကျွန်တော့်ဆီကို ရောက်မလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကန်စွန်းစည်းလေးကျော်ကို လတ်ကရော။
တစ်စုံတစ်ခုကို မရနိုင်တော့ကာမှ တွေးမိတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်လမ်းစပျောက်နေတယ်။ “ချဉ်ပေါင် တွေ၊ ကန်စွန်းတွေ၊ ကင်ပွန်းတွေ” ဆိုတဲ့အသံတွေလည်း ကျွန်တော့်နားထဲမှာပဲ့တင်ထပ်နေတယ်။ ကျွန်တော် နာရီကို ကမန်းကတမ်းကြည့်လိုက်တော့ မနက်သုံးနာရီတောင်ရှိနေပြီ။ နာရီနှိုးစက်ကို မနက် (၈)နာရီတိတိမှာ ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အိမ်ယာထဲကို မြန်မြန်ဝင်လိုက်တယ်။
မနက်ရှစ်နာရီအိပ်ယာထလိုက်ရင်တော့ ကျွန်တော့်ကန်စွန်းစည်းလေးအတွက် လေယာဉ်ချိန်မီတန် ကောင်းပါရဲ့ . . .။
နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၁ မဟေသီမဂ္ဂဇင်း
ဒီထဲမှာဝတ္ထုတို ၂၁ပုဒ်ပါပါတယ်။ဆရာသစ်ခက်အိမ်ပြောသလို လေထဲမိုးထဲမှာ စာအုပ်ကလေးထွက်ပါတော့ မယ်။
သန်းခေါင် ကြက်ဖတို့ တွန်ပြီ။ လမိုက်ရက်မို့ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး မှောင်နဲ့မည်းမည်း။
တစ်ရေးနိုး ကြက်ဖတို့ရဲ့ တွန်မြည် သံတွေကြောင့် အိပ်ရာက လန့်နိုး လာပုံရတဲ့ အိမ်အောက်က ခွေးလေးနက် ကျော်မရဲ့ တအူအူ၊ တအီအီ အသံကို မြင့်ဆောင် ကြားနေရတယ်။ အိမ်ခြေရင်းက ကုက္ကိုပင်ဆီက “ကျွီကျွီ” အသံတွေကတော့ သစ်ကိုင်းတို့ကို ညလေပြည်ရဲ့ ၀င်တိုးသံလား၊ ညဉ့်ငှက်တို့ရဲ့ သက်ပြင်း ချသံလား၊ မြင့်ဆောင် မဝေခွဲတတ်။ မြင့်ဆောင်ဘေးက ဇနီးသည် မိဌေးကတော့ အိပ်နေလိုက်တာ တရှူးရှူးနဲ့။ တစ်ခါတစ်ရံ ဟောက်သံတွေတောင် ထွက်လို့။ ဇနီးသည် မိဌေးရဲ့ ဟိုဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ ခုနစ်နှစ် အရွယ် သားလေး တွတ်ပီကတော့ ပိုးလိုးပက်လက်။ မြင့်ဆောင်ကတော့ ဘယ်ညာ လူးလိမ့်ရင်း မနက်ဝေလီ ဝေလင်း အချိန်ထိအောင် အိပ်ပျော်ပါ့မလားလို့ တွေးနေမိသေးတယ်။
ရန်ကုန်က ကိုတိုးမောင်ဆီကသာ ဖုန်းမလာဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် မြင့်ဆောင်အခုလို ဖြစ်နေစရာ အကြောင်းမရှိ။ ဒီလိုညမျိုး မရေတွက်နိုင် အောင် ကြုံဖူးခဲ့ပေမဲ့ ဒီညကျမှ ထူးထူးခြားခြား မြင့်ဆောင် ဘာတွေ ဖြစ်နေတယ်မသိ။ တောင်စဉ်ရေမရနဲ့ ဟိုတွေး၊ ဒီတွေး လျှောက်တွေး နေလိုက်တာလည်း အတွေးတွေက အပိုင်းတစ်ရာလောက် ရှိတဲ့ ကိုရီးယား ဇာတ်ကားတစ်ကားစာလောက် ရှိတော့မယ်။
အိပ်မရတော့ ခံတွင်းက ချဉ်သလိုလို ဖြစ်လာတာနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ မြင့်ဆောင် ထထိုင် လိုက်တယ်။ အိပ်ခန်းဝက ဆေးလိပ်ခွက် ထားတဲ့ဆီကို လက်ကလှမ်းရင်း မီးခြစ်ကို ခြစ်လိုက်တယ်။ ဖျစ်ခနဲ တောက်သွားတဲ့မီး ခြစ်ရဲ့အလင်းရောင်အောက်ကနေ အိမ်ရှေ့ခန်းဆီမှာ အိပ်နေတဲ့ ရှစ်နှစ် အရွယ်ကလေး လေးယောက်ဆီကို အကြည့်က ရောက်သွားတယ်။
ဒီဘက်ဆုံးမှာ အိပ်နေတဲ့ ကိုသံချောင်းရဲ့သား ကံကောင်း လေးက တရှူးရှူးနဲ့ အိပ်နေလိုက်တာ ရင်ဘတ်ကြယ်သီးလေးတွေ ပြုတ်ထွက်နေတဲ့ အင်္ကျီအောက်က ဗိုက်ကလေးက ပိန်လိုက် ဖောင်းလိုက်။ အလယ်က နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ တုတ်ပုနဲ့ ဗုတိုနှစ်ယောက် ကတော့ ရွာတောင်ပိုင်းက ထွန်းလှသားနဲ့ ထွန်းမြသား။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ မှောက်လျက်ကလေးတွေ အိပ်နေတာမို့ ကံကောင်းလေး လို ဗိုက်က ကြယ်သီးလေး တွေတော့ ပြုတ်ထွက်မနေ ကြ။ သူတို့နှစ်ယောက်ထဲက ဗုတိုဆိုတဲ့ ကောင်လေးက မြင့်ဆောင်နဲ့ အတူ ရန်ကုန်ကို လိုက်ရမှာမို့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံး ရက်လောက်ကတည်းက အိပ်လို့ မရအောင် ပျော်နေသူတဲ့။ ညဦးပိုင်းက မြင့်ဆောင်ကို ပြောပြထားလို့ သိနေရတာလေ။ အခုတော့လည်း ၀မ်းလျားမှောက်ပြီး အိပ်နေပုံ က တကယ့်ကို တမေ့တမော။
အိပ်နေရင်းက ဗိုက်က လေးဖောင်းပြီး ရှိုက်ငင်လိုက်တဲ့ ဟိုဘက်ဆုံးက “အသေးလေး” ဆိုတဲ့ ကလေးရဲ့အသံ ကြောင့် မြင့်ဆောင်အကြည့် တွေက အားလုံးထဲကနေ ဟိုဘက်ဆုံးကို ရောက်သွားတယ်။ အိပ်နေရင်း ရှိုက်ငင် လိုက်တာဆိုတော့ မအိပ်ခင်က ငိုထားလို့သာပေါ့။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် မအိပ်ခင်မှာ ငိုထားကြတဲ့ ကလေးတွေ အိပ်ပျော်တဲ့ အခါ မျက်ရည်မဲ့ ရှိုက်တတ်ကြတာကို မြင့်ဆောင် မြင်ဖူး တွေ့ဖူး ခဲ့သည်ပဲ။
မီးခွက်ကလေးကို မီး ညှိရင်း လက်တစ်ဖက်က ကိုင်ကာ ဒီဘက်က ကလေး သုံးယောက်ကို ခွကျော်ရင်း မြင့်ဆောင် အနားကပ်ပြီး အသေးလေးကို ကြည့်လိုက် တယ်။
“အလို... အသေးလေး ရဲ့ ပါးပြင်ပါးကွက်ကြားလေး နှစ်ဖက်ပေါ်မှာ မျက်ရည်စီး ကြောင်းတွေနဲ့ပါလား”
မြင့်ဆောင် မီးခွက်ကို ကိုင်ရင်း အသာလေးနောက် ပြန်ဆုတ်လိုက်တယ်။ ဒီလို ဆိုရင် ညဦးပိုင်း မအိပ်ခင် မှာ အသေးလေးတစ်ယောက် ငိုထားတာပေါ့။ ဘာကြောင့် ပါလိမ့်။ သူက ရန်ကုန်ကို မလိုက်ချင်လို့များလား။ ဟုတ်မှာပါလေ။ ရန်ကုန်ကို ခေါ်သွားတဲ့ ကလေးတွေထဲ က အနည်းစုကတော့ အသေးလေးလိုပဲ မလိုက်ချင် ကြတာပဲ ဥစ္စာ။ အတွေးတွေ ကို တရစပ်တွေးရင်း မီးခွက် ကလေးမှုတ်လို့ အမှောင်ထဲမှာ မြင့်ဆောင် ပြန်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ရန်ကုန်က ဖုန်းဆက်လာတဲ့ ကိုတိုးမောင် ရဲ့အသံကိုလည်း ပီပီပြင်ပြင် ပြန်ကြားယောင်လိုက်တယ်။
“ကိုမြင့်ဆောင်ရယ် ကျုပ်ဆိုင်အတွက် မဖြစ်မနေ အနည်းဆုံး လိုတာက ငါးယောက်ဗျ။ ခင်ဗျားက ဒီတစ်ခေါက် လေးယောက်ပဲ ရမယ်ဆိုတော့ ကျုပ်စိတ်ညစ် တယ်ဗျာ။ ဒီလို လုပ်ပါလား ဗျာ။ ခင်ဗျားလည်း အဆင် ပြေသွားတာပေါ့။ ပြောရရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ခင်ဗျားအရင်တစ်ခါလာတုန်း က ခေါ်လာခဲ့တဲ့ ခင်ဗျား သားလေး အခု ခုနစ်နှစ် လောက်တော့ ရှိပြီမလား။ ခင်ဗျားလည်း ခင်ဗျားသား ကို ကျောင်းမထားမယ့် အတူတူ ကျုပ်ဆိုင်အတွက် ခေါ်ခဲ့ပေးပါလား။ နောက်တစ် ယောက် တကယ်လို့ပြန်ရတော့ လည်း ခင်ဗျား ပြန်ခေါ်ပေါ့။ သူများကလေးတွေ တစ်လ ကို တစ်သောင်းခွဲပေးရင်၊ ခင်ဗျားသားကို နှစ်သောင်း ပေးမယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုလဲ... ကဲ”
မြင့်ဆောင်တို့ နေတာက ပဲခူး၊ သက္ကလဘက်က။ ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ ဒီနယ်က လူတွေက ရန်ကုန်တက်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဖွင့်လိုက် ကြတာ အဆင်ပြေသလား မပြောနဲ့။ ကိုတိုးမောင်တို့ မိသားစုဆိုရင် သုံးလေးနှစ် အတွင်းမှာ တိုက်တွေ၊ ကားတွေတောင် ၀ယ်ဖြစ်သွားတဲ့ အဆင့်ထိ ကြီးပွားကုန်တာ။ ကိုတိုးမောင်တို့မောင်နှမ လေးယောက်က ဆိုင်နာမည် တစ်ခုကိုပဲ တစ်၊ နှစ်၊ သုံး လေးတပ်လို့ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်တွေ ဟည်းဟည်းထ အောင် ဖွင့်ထားလိုက်တာ မြင့်ဆောင်အသိ။
ကိုတိုးမောင်တို့ ရွာမှာ နေကတည်းက မြင့်ဆောင်က ကိုတိုးမောင်တို့ အိမ်မှာ သူရင်း ငှား။ အဲဒီတုန်းက မြင့်ဆောင် နဲ့ မိဌေးနဲ့တောင် အိမ်ထောင် ကျပြီး သားလေး တွတ်ပီကို မွေးပြီးခါစလောက် ရှိဦးမှာ။ ကိုတိုးမောင်တို့မောင်နှမလေး ယောက်ကတော့ တစ်ယောက် တစ်အိမ်ထောင်စီနဲ့ အလျှို အလျှို အိမ်ထောင်ကျပြီးနေ ကြပြီလေ။ ကိုတိုးမောင်တို့မှာ က မိဘတွေက မရှိကြတော့ဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ် လောက်ကမှ ကိုတိုးမောင်ရဲ့ အစ်ကိုအကြီးဆုံး ကိုတိုး အောင်က ဘာစိတ်ကူးပေါက် တယ် မသိပါဘူး။ ရွာမှာရှိတဲ့ လယ်တွေ၊ နွားတွေရောင်းပြီး ရန်ကုန်တက်၊ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ဖွင့်လိုက်တာ ဟုန်းခနဲ အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရမှာ။ အဲဒီမှာတင် ညီဖြစ်တဲ့ ကိုတိုး မောင်ပါမက ညီမဖြစ်သူ နှစ် ယောက်ကိုပါ ရန်ကုန်ကို ခေါ်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အခွဲတွေကို ဖွင့်တော့တာပဲ။
ပထမပိုင်း ကိုတိုးမောင် ရန်ကုန်တက်တော့ ရွာမှာရှိ တဲ့ သူ့လယ်တွေတချို့တစ် ၀က်ရောင်းခဲ့ပေမဲ့၊ တချို့ တစ်ဝက်က ကျန်သေးတာမို့ မြင့်ဆောင်တို့ အလုပ်မပြုတ် သေးပါဘူး။ ဇနီးသည် မိဌေး၊ သားလေး တွတ်ပီတို့ နဲ့ ဣနြေ္ဒရရလေးပါပဲ။ ကိုတိုး မောင်တို့ ကျန်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီး ပေါ်မှာ တက်နေရင်း အိမ်နဲ့၊ လယ်နဲ့၊ နွားနဲ့။ အိမ်ကြီးရှင် ယောင်ယောင်၊ ဘာယောင် ယောင်တောင် ဖြစ်သွားသေး တာ။ ဒါပေမဲ့ မကြာပါဘူး။ ရန်ကုန်က ကိုတိုးမောင်က ဆိုင်စရိတ်အတွက် ငွေလိုတယ် ဆိုတာနဲ့ပဲ ရွာပြန်လာ ပြီး အိမ်နဲ့လယ်တွေ ရောင်းလို့ မြင့်ဆောင်တို့မှာ အိုးလွတ်၊ ခွက်လွတ် ဖြစ်သွားခဲ့ရတာ။ အဲဒီကတည်းက လယ်မရှိ၊ ယာမရှိ၊ မြေမရှိတဲ့ မြင့်ဆောင် တို့ မိသားစုသုံးယောက်က အခုနေတဲ့ ရွာချောင်းစပ်က တဲပုတ်ကလေးဆီ ရောက်လာ ခဲ့တော့။
သူရင်းငှား ရာထူးကနေ ပြုတ်သွားတဲ့ မြင့်ဆောင်လည်း ဒေသ အခေါ် “ဗောက်” ဆိုတဲ့ ကြုံရာကျပန်း အလုပ်ကို အဲဒီအချိန်ကတည်းက လုပ်ခဲ့ ရတာ။ မိန်းမဖြစ်တဲ့ မိဌေးနဲ့ အတူတူ စပါးရိတ်ချိန် စပါး ရိတ်၊ ပဲဆွတ်ချိန် ပဲဆွတ်နဲ့ ရရာအလုပ်လုပ်ရင်း နေလာ ခဲ့တာမှ မကြာသေးဘူး။
ကိုတိုးမောင်တို့ လင် မယား ရွာပြန်ပြီး ပထမဆုံး အကြိမ် အလှူ လုပ်ဖြစ်တဲ့နှစ် မှာပဲ ကိုတိုးမောင်နဲ့ မြင့် ဆောင်ပြန်ပြီး ဆက်သွယ်မိ ကြတာ။ ငယ်ငယ်ကတည်း က မြွေဟောက် စွယ်ကျိုးလို ကိုတိုးမောင် အပေါ်မှာ ဖြစ် လာခဲ့တဲ့ မြင့်ဆောင်ဟာ ကိုတိုးမောင် ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ဖြစ်တော့တာပါပဲ။
“ကိုမြင့်ဆောင်ရေ၊ ဒီကိစ္စကမဆိုးဘူးဗျ။ ခင်ဗျား လည်း ဘာပင်ပန်းတာမှတ် လို့။ ကျုပ်အနေနဲ့ကျတော့ လုပ်လို့ မကောင်းဘူးလေ။ ကျုပ်တို့ဒီဘက်ရွာမှာလည်း တချို့လူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေး က ကျုပ်အသိ၊ ခင်ဗျားအသိ။ အဲဒီတော့ဗျာ၊ ကျောင်းမထား နိုင်ကြတဲ့ မိဘတွေရဲ့ကလေး တွေကို ကျုပ်တို့ဆိုင်တွေမှာ စားပွဲထိုး အနေနဲ့ ခင်ဗျားခေါ် ပေးဗျာ။ ကလေးတွေကို နေ စရိတ်၊ စားစရိတ်အပြင် လစာ တစ်သောင်းခွဲစီလောက် ပေးမယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားလည်း ကလေး တစ်ယောက် ခေါ်လာပေးနိုင်ရင် ကလေးတစ် ယောက်ရဲ့တစ်လစာပေးမယ် ဗျာ။ ရန်ကုန်မှာကျတော့ တချို့လူတွေက စားစရာမရှိ ရင်သာနေမယ်။ သူတို့က လေးတွေကျတော့ ကျောင်း တွေများ ထားလိုက်ကြတာ ကော့လို့၊ ပျံလို့။ ရွှေကျောင်း ပြောင်ပြောင် ၀မ်းခေါင်ခေါင် ဆိုသလိုပဲဗျာ။ အဲဒါကြောင့် ဒီရွာဘက်က ကလေးတွေ ရှာပြီး ကျုပ်တို့ဆိုင်တွေရဲ့ စား ပွဲထိုးကိစ္စကို ခင်ဗျား စီစဉ် ပေးပါဦး”
ကိုတိုးမောင်ရဲ့ စကား ရှည်အဆုံးမှာ မရည်ရွယ်ပါဘဲ မြင့်ဆောင်တစ်ယောက် အလုပ်လက်မဲ့ မရေမရာဘ၀ ကနေ ရန်ကုန်-ပဲခူး။ စုန်ဆန် ကူးတဲ့ ကလေးကုတို့ ဖြစ်သွား ခဲ့ရတာလေ။ ပထမပိုင်းတော့ တော်တော့်ကို အဆင် ပြေခဲ့တာပါ။ မြင့်ဆောင်တို့ နယ်ဘက်မှာ ဆိုတာကလည်း စက်နဲ့ဖောက်ထားတာလိုပဲ ကလေးတွေက ပေါတယ် မလား။
“ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ် ရမှာဆိုပေမဲ့၊ ကိုတိုးမောင်တို့ ဆိုတာ ကိုယ့်နယ်သားအချင်း ချင်းလေ။ သူတို့ နေသလို၊ သူတို့ စားသလို နင်တို့ကလေး တွေလည်း နေရစားရမှာ။ ရွာ ဘက်မှာ ဖင်ထဲကို ရွှံ့တစ် ပိဿာ ၀င်ပြီးမှ စားရတဲ့ ထမင်းထက်တော့ အများကြီး သပ်ရပ်ပါတယ်ဟာ။ ကလေး တွေကို လယ်ထဲ အလုပ်မနိုင် သေးလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့ ထားမယ့်အတူတူ ရန်ကုန်က ကိုတိုးမောင်တို့ လက်ဖက် ရည်ဆိုင်ကို ပို့ထားရင် ဘယ် လောက်ဟန်ကျသလဲ။ လစာ လည်းရ။ လူရည်လည်းသန့် ကဲ”
ဒီလို စကားမျိုးတော့ မြင့်ဆောင်က ကိုတိုးမောင် မသင် ပေးပါဘဲနဲ့ ကျွမ်းကျင် ပြီးသားပဲ။ အလုပ်က သင် သွားတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့။ ပထမပိုင်းတော့ ရွာမှာ ရှိကြတဲ့ လက်လုပ်လက်စား ကလေးမိဘတွေက အင်တင် တင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုတိုးမောင် ဆိုင်ကို ရှေ့ဆုံးအနေနဲ့ ရောက်သွားတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် လောက်လည်း ရွာကို ငွေစ၊ ကြေးစလေးလည်း ပို့နိုင်ရော၊ ရွာက နောက်ထပ် လက်လုပ် လက်စားမိဘတွေလည်း သူ တို့ကလေးတွေကို ရန်ကုန် သွားထားမယ်ဖြစ်ရော။ တချို့ရွာနီးချုပ်စပ်က ကလေး တွေဆိုရင် မြင့်ဆောင်က တကူးတကသွားပြီး ခေါ်စရာ တောင်မလိုဘူး။ ရန်ကုန်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ပို့ဖို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် မြင့်ဆောင်ဆီ ကို ရောက်လာကြတာ။
မြင့်ဆောင် အနေနဲ့ ရန်ကုန်ကို ပို့ပေးရတဲ့ကလေး တွေကတော့ အရောင်က ခပ်စုံစုံပါ။ တချို့က အတန်း ကျောင်းမှာ တစ်တန်း လောက်အထိ တက်ခဲ့ဖူးသူ တွေ။ တချို့ကလည်း အတန်းကျောင်း မထားနိုင်တဲ့ မိဘရဲ့သားသမီးတွေမို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စာအံ နေကြသူ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အသက် ခြောက်နှစ်လောက်ကနေ ဆယ်နှစ်လောက် အသက် အရွယ်အပိုင်း အခြားထဲမှာ ရှိတဲ့ ကလေးအယောက် သုံးဆယ် လောက်ကို မြင့်ဆောင်က တော့ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ရန် ကုန်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တွေကို ပို့ခဲ့ပြီးပြီ။ ပထမပိုင်းတော့ ကိုတိုးမောင်တို့ မောင် နှမလေးယောက်ရဲ့လက်ဖက် ရည်ဆိုင်တွေကို အဓိကပို့ရ တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုတိုးမောင်တို့ အဆက်အသွယ်ကနေ အခြားလက်ဖက်ရည် ဆိုင်တွေကို ရောက်သွားတဲ့ ကလေးတွေလည်း ရှိတယ်။
“ကလေး ပွဲစားကြီး၊ ကြည့်လုပ်ဦးဗျို့။ ရွာက ယောက်ျားလေးတွေကို ခင်ဗျား ရန်ကုန်ကို အပို့ ကောင်းလို့ ရွာမှာ ကလေး ဘောလုံး တစ်သင်းစာတောင် မရှိတော့ဘူး။ သူတို့တွေ အရွယ်ရောက်ပြီး ရန်ကုန်မှာ အိမ်ထောင် ကျကုန်မှဖြင့်၊ ရွာ က သူတို့နဲ့ ရွယ်တူကောင် မလေးတွေ လင်မရဘဲ ဖြစ်ကုန်ကြဦးမယ်။ ကြည့်လုပ် ဗျို့”
အစပိုင်းမှာ ဒီလိုအသံ တွေကို ကြားရပေမဲ့ မြင့် ဆောင်တို့ကတော့ ပြုံးဖြီးဖြီး ပါပဲ။ သူတို့ဘာသာသူတို့ ကလေး ပွဲစားပဲခေါ်ခေါ်၊ ကလေးကုန်သည်ပဲခေါ်ခေါ်။ မြင့်ဆောင်တို့ကတော့ နား ကင်းပိတ်နေတဲ့ မြွေတစ် ကောင်လိုပဲ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လျှောခနဲ၊ လျှောခနဲ လုပ်နေတာပါပဲ။ ဒီလို ကလေးတွေကို ပို့ပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြင့်ဆောင်ရတဲ့ ငွေကလည်း နည်းမှမနည်းဘဲ ဥစ္စာ။ တစ်ယောက်ပို့ရင် တစ် လစာ တစ်သောင်းခွဲ ဆိုတော့၊ တစ်ခေါက်ကို ငါးယောက်ပို့ တယ်ထားဦး၊ မြင့်ဆောင် အတွက်က ခုနစ် သောင်းခွဲပဲ။လမ်းစရိတ်ဆိုတာက ကိုတိုး မောင်တို့ဆီက သီးသန့်ရပြီး သားလေ။ ခုနစ်သောင်းခွဲဆို တာက လက်တွင်းပါ အသား တင်လေ။ မြင့်ဆောင်ဖြင့် မိန်းမဖြစ်တဲ့ မိဌေးရဲ့နား ပေါက်ဟောင်းလောင်းကလေး တွေကိုတောင် ရွှေတိုရွှေစ လေးနဲ့ ဖုံးပစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိ။
ပြီးတော့ မြင့်ဆောင်မှာ က ရည်ရွယ်ချက်နောက်တစ် ခုက ရှိသေးတယ်။ သား လေး တွတ်ပီလေ။ တွတ်ပီကို ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရင် ကျောင်း ထားရမယ်။ တွတ်ပီက အခု ခုနစ်နှစ်ကိုတောင် ရောက်နေ ပေမဲ့ စားဖို့၊ နေဖို့ လုံးလည် လိုက်နေသလို ဖြစ်တာနဲ့ပဲ၊ တွတ်ပီနဲ့ ကျောင်းဆိုတာက အဝေးကြီးမှာ ရှိနေသေးတာ။အခုအိမ်မှာ ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ လေးယောက်ကို ရန်ကုန်ပို့ပြီး ရင်တော့၊ သူတို့လေးယောက် အတွက် ရလာမယ့် ငွေခြောက် သောင်းကို ဆန်လေး၊ ဆီ လေး ၁၅ ရက်စာလောက် ၀ယ်၊ ဆန်ခါပေါက်လို ဖြစ်နေတဲ့ ကြယ်မြင်လမြင် ဓနိမိုး အိမ်လေးကို ဓနိပျစ်လေးတွေ ၀ယ်ပြီး အစားထိုး၊ ပြီးရင် တော့ မိုးလေးကျ၊ ကျောင်း လေးဖွင့်ရင် တွတ်ပီကိုတော့ အတန်းကျောင်းမှာ ထားနိုင် လောက်ပါပြီ။
“ဟေ့ကောင် ဗုတို၊ မင်း လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်နဲ့ မအိပ်တာ လား”
“အေးကွ ငါတို့ မနက် ဖြန် ရန်ကုန်ဆိုတာကြီးကို ရောက်တော့မှာမို့ ပျော်နေတာ တုတ်ပုရဲ့”
“တိုးတိုးပြောပါ ဗုတိုရ၊ အသေးလေးနိုးသွားလို့ ထငို နေပါဦးမယ်။ ဒီကောင်က မင်းသိတဲ့ အတိုင်း”
“အေးကွာ အသေးလေး က အခြောက်ကျနေတာပဲ။ ရန်ကုန်ကို သွားရမှာတောင် သူ့အမေနဲ့ မခွဲနိုင်လို့ ငိုနေရ သေးတယ်။ ငါကတော့ အေး ဆေးပဲ။ ငါ့အမေက ငိုနေတာ တောင် အမေ ငိုမနေနဲ့၊ သား ပိုက်ဆံပို့လိုက်မယ်လို့ ပြောခဲ့ သေးတယ်”
“မဟုတ်ဘူး ဗုတိုရဲ့။ အသေးလေးက ကျောင်းဖွင့် ရင် ဆရာမ အတန်းကျောင်း တက်ချင်လို့ ကျောင်းမတက် ရမှာစိုးလို့ ငိုနေတာ”
အသံလေးတွေက တိုးတိုးအုပ်အုပ်နဲ့ ပကျိ၊ ပကျိ ပြောနေကြပေမဲ့၊ မီးခွက် ကလေးမှုတ်ပြီး အမှောင်ထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေတဲ့ မြင့်ဆောင် အတိုင်းသားကြား နေရတယ်။ အိမ်အမိုးကလေး က ဆန်ခါပေါက်လို ဖြစ်နေပေမဲ့ လမိုက်ရက်ညမှောင်မှောင် ထဲမှာမို့ အလင်းတွေက အိမ် ထဲကို တိုးဝင်မလာနိုင်ကြ။ စကားတွေပြောနေတဲ့ ကလေး နှစ်ယောက်ကတော့ အမှောင် ထဲမှာ မြင့်ဆောင်ထိုင်နေတာ ကို မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
“ဟေ့ကောင် ဗုတို၊ ဦးမြင့်ဆောင်ကြီးရဲ့သား တွတ်ပီကိုကျတော့ ဦးမြင့် ဆောင်ကြီးက ငါတို့လို ရန်ကုန်ကို မပို့ဘူးလားကွ”
“ဟာ မင်းက မသိဘူး လား။ သူတို့က ပိုက်ဆံရှိ တယ်လေကွာ။ ဆန်ဆိုပြည်လိုက်၊ ဆီဆို ပုလင်းလိုက် ၀ယ်နိုင်တဲ့လူတွေကွ။ ငါတို့ လို မနက်ထမင်းစား၊ ညနေ ဆန်ပြုတ်သောက်တဲ့အဆင့်မှ မဟုတ်တာ။ ပြီးတော့ တွတ်ပီက ကျောင်းဖွင့်ရင် ဆရာမ အတန်းကျောင်းမှာ တက်မှာတဲ့ကွ”
အသံလေးတွေက တိုး တိုးအုပ်အုပ်နဲ့ ပြောရင်းက ပျောက်သွားပြန်တယ်။ ကလေးတွေ ပြန်အိပ်သွားကြ ပြီထင်ရဲ့။ အမှောင်ထဲမှာထိုင် နေတဲ့ မြင့်ဆောင်လည်း အခန်းထဲဘက်ကို ပြန်ဝင် လိုက်တယ်။ လေတွေ ဒလဟော တိုက်နေလို့ အိမ်လေးက သိမ့် သိမ့်တုန်နေပေမဲ့ မြင့်ဆောင် ရင်တွေ အသက်ရှူ မ၀သလို ဘဲ မောဟိုက်နေတယ်။ အိမ် ရှေ့က ကလေးလေးယောက်။ သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး မြင့်ဆောင် ရလာမယ့် ငွေခြောက် သောင်း။ ပြီးတော့ သားလေး တွတ်ပီ။ မြင့်ဆောင်ရဲ့အာရုံ တွေဟာေ၀၀ါးထွေပြားနေဆဲ။
“တွတ်ပီက ကျောင်း တွေဖွင့်ရင် ဆရာမအတန်း ကျောင်းတက်မှာကွ” ဆိုတဲ့ အိမ်ရှေ့က ကလေးတစ် ယောက်ရဲ့စကား။
“ခင်ဗျားသားလေးကို ကျောင်းမထားမယ့်အတူတူ၊ ကျုပ်ဆိုင်မှာထားဖို့ ခေါ်ခဲ့ပါ လား” ဆိုတဲ့ ကိုတိုးမောင်ရဲ့ ဖုန်းထဲကစကား။
လင်းကြက်တို့ တွန်နေ ပြီမို့ မကြာခင်မိုးလင်းတော့ မှာပဲလို့ မြင့်ဆောင်တွေးလိုက် တယ်။ သားလေးတွတ်ပီက တော့ မိန်းမဖြစ်သူ မိဌေး ဘေးမှာ တုတ်တုတ်မှတောင် မလှုပ်။ တစ်စုံတစ်ခုကို မြင့် ဆောင် ခပ်သွက်သွက်ပဲ စဉ်း စားဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီ လို မလုပ်လို့လည်းမရဘူး။ မကြာခင်မှာ မိုးကလင်းလာ တော့မှာလေ။
“မိဌေး မိဌေး ဟဲ့ ထစမ်းပါဦး”
“အင်း ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုမြင့်ဆောင်ရဲ့။ တော် ကား ဂိတ်ကို ဆင်းမယ့်အချိန် ရောက်ပြီလား”
“မဟုတ်ဘူးဟ။ ငါ မနက်မိုးလင်းရင် ရန်ကုန် မသွားတော့ဘူး။ နောက် လည်း ဘယ်တော့မှ မသွား တော့ဘူးဟာ”
“အယ် အဲဒါဆို အိမ်ရှေ့ က ကလေးလေးယောက်ကို တော်ဘယ်လို လုပ်မှာတုံး”
“မိဌေးနှယ်ဟာ။ တုံး လိုက်တာ။ မိုးလင်းလို့ ရှိရင် ကလေးတွေကို နှိုးပြီး သူ့အိမ် သူပြန်လွှတ် လိုက်မှာပေါ့ဟ”
(ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း၊ဇွန်လ ၂၀၁၂)
အခု ကျင်းပနေတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာ ကျုပ် ကြည့်မရဆုံး သောသူက ကျုပ် ယောက္ခမကြီးပဲ။ ကြည့်ဦးလေ သူ့ပုံကြီးကို။ ကျုပ်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ဘောလုံးပွဲ တစ်ခု နဲ့ နှိုင်းကြည့်မယ် ဆိုရင် ကျုပ်ယောက္ခမကြီး က တစ်ကွင်းလုံး လှည့်ပတ်ကစားနေ တဲ့ ကစားသမားပဲ။ တောင်ပံမှာ လည်း သူ၊ ရှေ့တန်း နောက်တန်းတွေ မှာလည်း သူ ဆိုသလို မျိုး။ ခန်းမရှေ့ အဝင်အဝက လက်ဖွဲ့ထုပ်တွေ လက်ခံတဲ့ နေရာက ကောင်မလေး တွေကို လည်း ဟိုလက်ဖွဲ့ ပစ္စည်းက ဟိုနား မှာပုံ၊ ဒီလက်ဖွဲ့ ပစ္စည်းက ဒီနေရာ မှာချနဲ့ ပါးစပ်က ပွစိ၊ ပွစိ ပြောနေလို့ အားမရသေးဘူး။ ကောင်မလေးတွေ ရေးထားတဲ့ စာရင်းကိုလည်း စာရင်းစစ် ဝင်လုပ်လား လုပ်နေသေးရဲ့။ ခန်းမထဲ လျှောက် လမ်းဘေးမှာ ရှိတဲ့ ပန်းအိုးထဲက ပန်းတွေကိုလည်း ဟို ပြင်ထိုး၊ ဒီပြင်ထိုး လုပ်နေသေးတယ်။ တကယ်ဆို ဒီပွဲအတွက် ပန်းအိုးထိုး သမားတွေ သူ့အဖွဲ့နဲ့ သူရှိပြီးသားပဲ။ သူက ပန်းတွေကို ပြင်ထိုးနေလည်း ပန်းအိုးတွေက ပိုပြီး လှသွားတယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဧည့်သည်တွေ ကလည်း စုံအောင် မရောက် ကြသေးဘူးမလား။ ရောက်လာတဲ့ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ဧည့်သည်တွေကလည်း တချို့ဧည်သည်တွေက ခန်းမရဲ့ဒီဘက် ထောင့်လောက်မှာ နေရာယူ၊ တချို့ ဧည့်သည်တွေ ကျတော့ ဟိုဘက် ထောင့် မှာ နေရာယူ။ အဲသလို ဖြစ် နေတော့ သူ့မှာ ဟိုပြေး၊ သည်ပြေး နဲ့ လောက် စာလုံးကြီးကြီး တစ်လုံး လင်ပန်းထဲမှာ ထည့်လှိမ့်ထားသလို မျက်စိကို နောက်လို့။
ဝဝဖိုင့်ဖိုင့် သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆင်မြန်းထားတဲ့ အရာတွေက အရောင် တစ်ဖိတ်ဖိတ် လက်နေတဲ့ ရုရှား စိန်အတုတွေလေ။ မီးရောင် တွေ ဖျတ်ခနဲ ပွင့်လိုက်တာနဲ့ လက် ခနဲ လင်းသွားတယ် ဆိုတဲ့ စိန်မျိုး တွေ။ ဝတ်ထားတဲ့ အရောင်က အဝါရောင် ဝမ်းဆက်ဆိုတော့ မျက်ခုံးတွေ၊ မျက်ခွံတွေ၊ ပါးတွေမှာ ခြယ်ထားတဲ့ အရောင်တွေ ကလည်း အဝါ။ ဖိနပ်က အစ အဝါ။ အဲ ..နှုတ်ခမ်း ကျတော့ အနီရောင် တောက်တောက် ဗျ။ ဒါကလည်း ကျွန်တော့် ဇနီးလောင်း မင်္ဂလာ သတို့သမီးကို ပြင်ပေးတဲ့ အလှဖန်တီး ရှင်တွေ က လက်စွမ်းပြထား တာလေ။ မပြလို့ လည်း ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။ သတို့သမီး ကိုပြင်ဖို့ ငှားကတည်းက အမေ့ကိုပါ အဆစ်ပြင်ပေးရမယ် ဆိုတာကို သူက အော်ကြီး ဟစ်ကျယ် လုပ်ထား တာကိုး။
အခုတော့ ယောက္ခမကြီးဘာ တတ်နိုင်ပြီလဲ။ မိတ်ကပ် ထူထူတွေရဲ့ အစွမ်းကြောင့် ဟိုပြေးဒီပြေး လုပ်နေတဲ့ သူ့မျက်နှာ မိတ်ကပ်နဲ့ ချွေးနှစ်ပါး ပြိုင်ပြီး ဗွက်ပေါက်နေ ပြီလေ။ အံမယ် အံမယ် ဒါတောင် မင်္ဂလာ စတိတ် စင်ပေါ်က မင်္ဂလာကိတ်မုန့် နားသွား ပြီး ဘာတွေ စပ်စုနေသေးလဲ မသိဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် သူကိုယ်တိုင် ကျုပ်တို့နဲ့ အပြိုင် ကိတ်မုန့်ကို လှီးချင်နေသေးတဲ့ပုံ။ ကိတ်မုန့်ကို ကျော်ပြီး ဒီဘက် တီးဝိုင်းက သီချင်းဆိုနေတဲ့ အဆိုတော်ကို အသက်မပါစွာ ဝတ်ကျေ တမ်းကျေ ပြုံးပြနေ လိုက်သေး ။ ဟော..ဟိုဘက်ကို ခပ်သွက်သွက် လျှောက်သွားပြန်ပြီ။ သြော် သူ့မိတ်ဆွေ ဧည့်သည်ထင်ပါရဲ့။ ဖက်လဲတကင်း နှုတ်ဆက်နေပုံက ဖက်နမ်းတော့မယ့် ပုံနဲ့။ ကျုပ် ယောက္ခထီး သူ့ ယောက်ျား လက်ကိုလည်း လှမ်းဆွဲလို့ မိတ်ဆက်ပေး နေလိုက်သေး။ ဟော ကြည့်။ ပြောရင်း ဆိုရင်း ဒီဘက်ကို လျှောက်လာပြန်ပြီ။ ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်ကြီး နဲ့တော့ ဘယ်တော့ ချော်လဲပြီး ရှေ့သွားတွေ တစ်ချောင်းချင်း ပြုတ်ထွက် ကုန်မလဲ မသိဘူး။ ကျုပ် ရဲ့မျက်စိထဲမှာ ငါးစင်ရိုင်း အကောင် လိုက် ဝင်စူးနေသလို ကန့်လန့်ကြီး ဖြစ်နေတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ ယောက္ခမကြီးလေ။ ဧည့်သည်တွေ စုံအောင် မရောက် သေးတော့ မင်္ဂလာ အခမ်းအနား စရမယ့် အချိန်ကလည်း လိုသေးလို့ ခန်းမထဲမှာ ဟိုသည် အကဲခတ်နေတဲ့ ကျုပ် ရဲ့အနားကို လာပြီးတော့ တောင် ဆရာ လုပ်နေလိုက်သေး။
‘ဟဲ့..သြော် ငါ့သား ဒီမှာ ထွက်ပြီး ဘာလုပ်နေ ရတာတုံး။ ဝင်ဝင်။ သတို့သား ဆိုတာ အခါတော် ပေးမှ ခန်းမထဲကို ဝင်ရတာ သြော် …ဒုက္ခ။ ဒီကလေးနှယ် မသိတတ် ရန်ကော”
ကျုပ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာ ကျုပ်ကြည့် မရတဲ့ နောက်ထပ် နှစ်ယောက်က ကျုပ်ဇနီး ရဲ့မောင် နှစ်ယောက်ပဲ။ ကျုပ်ဇနီးရဲ့မောင်တွေ ဆိုတော့ ကျုပ် ရဲ့ယောက်ဖ တွေပေါ့။ တစ်ယောက် GTC နဲ့ ကျောင်းပြီးပါပြီ။ နောက် တစ်ယောက်ကတော့ သင်္ဘောတက်ဖို့ ဒေါင့်ဆင်းနေတာ။
ကျုပ်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲက မဟာသန္တိသုခ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆိုတော့ ပြောရရင် သိပ်ပြီး ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်ကြီး မဟုတ်ဘူးလေ။ နှစ်ဖက် မိဘ ဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ခင်မင် ရင်းနှီးသူ တွေလောက်သာ ဖိတ်ပြီး လုပ်တဲ့ပွဲ။ နေရာ ထိုင်ခင်း၊ လာမယ့် ဧည့် ပရိသတ် အရေအတွက် ဆိုတာက ကွက်တိ။
ဒါကိုလေ ဘာမသိ ညာမသိ သင်းတို့နှစ်ကောင်က ခေါ်လာလိုက် တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆိုတာက အပုံ အပင်လေ။ GTC ကောင်ကလည်း ဆယ်ယောက် ထက်မနည်း။ သင်္ဘော သား လောင်းလျာကလည်း GTC ကောင်ထက် မလျော့ ဆိုသလို။ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဧည့် ပရိသတ်တင် ခေါပဏီ တပ်တစ်သိန်းထက် များနေ ဦးမလားပဲ။ မင်္ဂလာပွဲ မှာကတည်းက သူတို့အမေ၊ ကျုပ်ယောက္ခမကြီးလို ပဲ တစ်ကွင်းလုံး ခြေရှုပ်နေ ကြတာလေ။ ပါလာတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ကလည်း သူတို့ရဲ့ အီစီကလီတွေ လား၊ ပြည် တည်တည်တွေလား မပြောတတ်ပါဘူး။
”အောင်မာ..အောင်မာ .. ကြည့်စမ်း။ သင်းတို့က တစ်ယောက် တစ်ခွက်စီ ချထားတဲ့ ရေခဲမုန့်ကို အားမရဘဲ စားပွဲထိုးကို ခေါ်ပြီးတော့ တစ်ခွက်စီတောင် ထပ်ပြီး မှာနေ လိုက်သေးတယ်။ ဘုရားရေ ဒီလိုဆို ရင်တော့ နောက်ထပ် ရောက်လာမယ့် ပရိသတ်တော့ ဂွမ်းပြီ”
မင်္ဂလာ အခမ်းအနား ကျင်းပ နေပြီမို့ လျှောက်လမ်းမှာ လျှောက်လာတဲ့ ကျုပ်လည်း ကျုပ်ယောက်ဖ တွေရဲ့ဝိုင်းကို အမှတ်မထင် မျက်စိ အရောက်မှာ ထော်လော်ကန့် လန့် ကမောက်ကမတွေ မြင်ရတာလေ။ ကျုပ်ဖြင့် လျှောက်လမ်းမှာ ခလုတ် တောင် တိုက်သွားချင် မိသေးတယ်။ ဒင်းတို့ကြောင့်။ ကျုပ်ဘေးက တွဲလျှောက်လာတဲ့ ဒင်းတို့ အစ်မ မျက် နှာသာ မရှိရင် ဒင်းတို့ ကျုပ်လက်ချက် နဲ့ စိစိညက်ညက် ကြေပြီ။ ဘယ်လို ဟာမျိုးလေးတွေ ပါလိမ့်။ အလိုက် ကန်းဆိုးကို မသိဘူး။ လက်ဖွဲ့ကျ တော့ ဒင်းတို့ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ဖွဲ့လုံးမှ တစ်မျိုးလောက်ပဲ နေမှာ။ ကျုပ်က တစ်ယောက်ကို ၃၅ဝဝ ဖိုး ကျွေးတာ ဆိုတော့ သင်း…သင်း တို့ အဖွဲ့တင် အရှုံးက သုံးသောင်း ကျော်လောက် ဖြစ်နေမှာ။ ကျုပ်ရဲ့ အတွေးတွေဟာ လက်ရှိ အခြေအနေ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ နေရာ ထိ ကူးစက် ပျံ့လွင့်လာတော့ အဲဒီ အချိန် ကျုပ် မျက်နှာကြီးလည်း သုန်မှုန်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။
”ကဲ…ယောက်ဖရေ။ ရှေ့ မျက်နှာ နောက်ထားပြီး ပြောလိုက် ဦးမယ်။ ဒီည အဖို့ ခဲဖိုးလေး မ စ ခဲ့ပါဦး”
ကျုပ်ရဲ့ ယောက္ခမ အိမ်ပေါ် ရောက်ရောက်ချင်း ယောက်ဖတွေ ဆီက ထွက်လာတဲ့ စကားတွေ လေ။ သူတို့ကိုသာ ခဲဖိုး ဆိုတာ မ ပေးခဲ့ရင် ဒီတစ်ညတော့ သူတို့ အစ်မ ကိုတောင် ကျုပ်နဲ့ ပေးအိပ်ပါ့ မလားမသိ။ ကျုပ်ဖြင့် အံ့သြလွန်း လို့ ပါးစပ်ကနေ ‘အမ်’ လို့တောင် အာမေဍိတ် ထွက်သွားတာ။ ကြား ….ကြားဖူးပေါင်။ အစ်မ မင်္ဂလာ ဦးည မှာ ခဲဖိုးတောင်းတဲ့ ယောက်ဖ တွေရယ်လို့။ ကျုပ်လည်း မကြည်တဲ့ စိတ်တွေကို လျှော်ဖွပ်၊ သုန်မှုန် နေတဲ့ မျက်နှာပြင်ကို သကာရည် လောင်းပြီး သူတို့ တောင်းတဲ့ ခဲဖိုး ကို စိတ်ထဲက လုံးဝမပါဘဲ ပေးလိုက် ရတယ်။ အတွေးထဲ မှာတော့ ကျုပ်ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ သင်းတို့တွေ အရက် သွားသောက် ကြပြီး သင်းတို့ တစ်အုပ် လုံး အန်ဖတ် ဆို့နေ ကြပါစေပေါ့။
OK . . .Thank you..
”ယောက်ဖရေ..အိပ်မက်လှ လှမက်ပါစေ.. ကျွန်တော် တို့တော့ ဒိုးပြီ”
ဘာကွ။ အိပ်မက်လှလှ မက်ရဦးမယ် ဟုတ်လား။ မင်္ဂလာဦးညကွ။ မင်္ဂလာဦးည။ ဒီလိုညမျိုးမှာ အိပ်စရာလား မြွေပွေးကိုက် လေးတွေရဲ့။ သွားကြ၊ သွားကြ ပြန်မလာ ကြနဲ့ ။ တစ်သက်လုံး ပြန်မလာ လေကောင်း လေပဲ။ ဘယ်လို ဟာတွေမှန်းကို မသိဘူး။
ဟုတ်တယ်။ ကျုပ်လည်း စိတ် ထဲကနေ အဲသလိုပဲ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ကျိန်ဆဲ ထည့်လိုက်တော့တယ်။ အေးရော။
”ဒီနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီ မှာကွာ။ မန်ယူတို့ ဘယ်လို ဖြစ်နေမှန်းကို မသိပါဘူး။ ကဲ..ကြည့် မနေ့ည က ကန်တဲ့ပွဲမှာ ဘလက်ဘန်း အသင်း လိုမျိုးကိုတောင် နှစ်ဂိုး တစ်ဂိုး နဲ့ ရှုံး ရတယ်လို့”
ကျုပ်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ ကျုပ်ကြည့်မရတဲ့ တတိယမြောက် ပုဂ္ဂိုလ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျုပ်ရဲ့ ယောက္ခထီးကြီးလေ။ မင်္ဂလာဦးည မှာ ညစာစားပြီးလို့ ဟိုယောက် ဖ မြွေပွေးကိုက် လေးတွေလည်း မရှိ တော့တာမို့ ယောက္ခမအိမ်ရဲ့ ဧည့် ခန်းမှာ ကျုပ်ခြေညောင်း လက်ဆန့် လုပ်နေတုန်း ကျုပ်ကို ဝင်ပြောလိုက် တဲ့ ယောက္ခထီးကြီးရဲ့ စကားတွေ လေ။ သူပြောတဲ့ စကားတွေကို ကျုပ် သေသေချာချာ ကြားလိုက်ပေမယ့် မသိလိုက် မသိဘာသာ ”အော်….အင်း” ဆိုပြီးပဲ ရော ယောင်ယောင် လေးနေ လိုက် တယ်။ ဒီစကားထဲ ကျုပ်ဝင်မိသွား လို့ကတော့ တော်တော်နဲ့ ပြန်ထွက်လို့ ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတာ ကျုပ် သိနေတယ်။ သူ့သမီး၊ ကျုပ်ရဲ့ဇနီးဆီ ကနေ ဒီအဘိုးကြီး ဘယ်လောက်လေ ရှည်တဲ့ အကြောင်းကို ကျုပ်က အစ ကတည်းက တီးမိ ခေါက်မိပြီးပြီ လေ။
”ကဲကွာ…ကောင်းရော လစ်ဗျားမှာ ဖြစ်နေတဲ့ စစ်မီးက အခုအချိန်ထိ အရှိန်မသေသေးဘူး ဆိုပဲ။ ဥရောပ ဘက်က နိုင်ငံ သင်္ဘော တွေတောင် လစ်ဗျား ကမ်းလွန် ကနေ အီတလီ ဘက်ကိုဖြတ်ရသတဲ့။ လစ်ဗျားကို ကပ်မရဘူး ဆိုပဲ။ သင်္ဘောသားတွေ ဘဝကလည်း မလွယ်ပါဘူး။ သူတို့ခင်ဗျာ ကမ္ဘာပတ်နေကြ ရတာ ဆိုတော့ ဆိုမာလီ ဘက်ရောက် တော့လည်း ဓားပြရန် ကြောက်ရ။ ကဲ…အခုလည်း လစ်ဗျား စစ်တဲ့။ ဦးတူထဲမှာ ဥရောပဘက် ရောက်နေတဲ့ သင်္ဘောသား တစ်ယောက် ရှိတယ် ကွ”
ကျုပ်အသံက သာမန် ထက် အတော်လေးကို တိုးလျနေပြီး စိတ်ဝင်စားမှုလည်း လုံးဝ မရှိမယ့်ပုံကို ပြနေမှာက သေချာတယ်။ အဘိုး ကြီးကတော့ ရိပ်မိမလား။ မရိပ်မိ မလား မသေချာပေမယ့် ကျုပ်က တော့ ဒီဝိုင်းကနေ ထပြေးချင်ပြီ။ ကျုပ်ရဲ့အသစ်စက်စက် ဇနီး၊ ကျေး ဇူးရှင်မလေးကလည်း ဘယ်ချောင် ရောက်နေလဲ မသိပါဘူး။ တကယ် ဆိုရင် တစ်နေကုန် ပင်ပန်းထားတဲ့ ကျုပ်တို့ အနားယူသင့်ပြီလေ။ ဒါ ကို အလိုက်ကန်းဆိုး မသိတဲ့ အဘိုးကြီးက ဧည့်ခန်း စားပွဲပေါ်က ဂျာနယ်တွေ တစ်စောင် ပြီး တစ်စောင် လှန်ပြီး ပြောချင်တာတွေ ပြောနေတာ။ ကျုပ်လည်း သူပြောသမျှ တွေကို ‘သြော်’ ‘အင်း’ ဆိုတာလောက် တောင် မလုပ်ချင်တော့တာနဲ့ အဘိုးကြီးကို မီးနီပြလိုက်တဲ့ အနေနဲ့ ကျုပ် ရှေ့ စားပွဲပေါ်က တွေ့ရာ ဂျာနယ် တစ်စောင်ကိုပဲ ကောက်ကိုင် လိုက်တယ်။
”အေးကွာ…မြန်မာပြည်မှာ လည်း ဂျာနယ် အတော်များများက စာပေ စိစစ်ရေး တင်စရာ မလိုဘဲ သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ရလာတော့ တချို့ အနုပညာ ဂျာနယ်တွေ များကွာ။ ကြည့်ဦး။ မြန်မာ မင်းသမီး တွေ၊ မော်ဒယ် ပုံတွေကို တိုတိုနံ့နံ့ တွေနဲ့ ရိုက်ကူးပြီး ထုတ်လာကြတယ်။ ဒီပုံတွေက မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လည်း မကိုက်ညီပါ ဘူးကွာ။ ကဲ… မင်းကိုင်ထားတဲ့ ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံး ကိုပဲ ကြည့်လိုက်ဦး”
”ဟိုက်…သေရော” လို့ပဲ ကျုပ်ထအော်ပစ် လိုက်ချင်တော့တယ်။ ကျုပ်ကံများ မကောင်းလိုက် ပုံလေ။ အဘိုးကြီးက အားကစား ဂျာနယ် ကိုင်ပြီး ဘောလုံး အကြောင်း ပြောတော့လည်း စိတ်မဝင်စားဟန် ပြပြီးပြီ။ ပြီးတော့ သတင်း ဂျာနယ်ကိုင်ပြီး သင်္ဘောသား သတင်းတွေ ပြောနေတော့လည်း မသိလိုက် မသိဘာ သာ နေနိုင်ခဲ့ပြီးပြီ။ တကယ် တော့ ကျုပ်က သူဘာမှ ထပ်ပြီး မပြောတော့အောင်လို့ တွေ့ကရာ ဂျာနယ် တစ်စောင်ကို ကောက်ကိုင် လိုက်တာပါ။ ကျုပ် ကောက်ကိုင် လိုက်တဲ့ ဂျာနယ်က အနုပညာ ဂျာနယ်ကြီး ဖြစ်နေတာကိုး။ အဘိုးကြီး ပြတဲ့ မျက်နှာဖုံးကို ပြန်ကြည့်မိ တော့မှပဲ အဆိုတော် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ စကတ် တိုတို၊ ရင် ဟိုက်ဟိုက်နဲ့ ပုံကိုတွေ့လိုက်ရတာ လေ။
ကျုပ်လည်း အဘိုးကြီးကို တော်တော် စိတ်ညစ်လာပြီ။ ရုပ်ရှင် တွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ ထဲက မင်္ဂလာဦးည သတို့သား လို ‘ဝါး’ခနဲ ‘ဝါး’ခနဲသာ အော်ပြီး ‘သမ်း’ ပစ် လိုက် ချင်တော့ တယ်။ တကယ်ပါပဲ။
”မေမေက ဒီနေ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ ရလာတဲ့ လက်ဖွဲ့ငွေသား စာရင်းကို ကြည့်ပြီး ပစ္စည်း စာရင်းတွေကို လည်း မှန်းပြီး တွက်ပြီးပြီတဲ့ မောင် ရေ..ရလာတဲ့ အဖြေကတော့ ခွက် ခွက်လန်အောင် ရှုံးတယ်တဲ့”
မင်္ဂလာဦးညရဲ့ မင်္ဂလာအိပ်ခန်း ထဲမှာ မင်္ဂလာ လက်ဖွဲ့တွေကို တစ်ထုပ်ပြီး တစ်ထုပ်ဖြေရင်း၊ အသစ် စက်စက် မင်္ဂလာ သတို့သမီးလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာ က ထွက်ကျ လာ တဲ့ မူရင်း စကားသံတွေပါပဲ။ ဘာတဲ့။ ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးတယ် ဆိုလား။
ခွက်ခွက်လန်အောင် ရှုံးတယ် ဆိုတော့ ဒီနေ့ပွဲဟာ ဈေးပြိုင် စနစ် နဲ့ ကျင်းပလိုက်တဲ့ လေလံပွဲတစ်ခု လိုလို။ ဒါမှမဟုတ် သူနိုင် ကိုယ်နိုင် အပြိုင်ကြဲ ကြရတဲ့ လောင်း ကစားပွဲ တစ်ခု လိုလို။ ဘာလိုလို ကြီးတောင် ဖြစ်သွား ရသေးတယ်။ အံမယ်… ဒီစကားပြောပုံ ထောက်ရင် ကျုပ်ရဲ့ ယောက္ခမကြီးက သူ့သမီး မင်္ဂလာ ဆောင်မှာ အတော် လေးမြတ်မယ်လို့ ထင်ထားတဲ့ ပုံပဲ။ ရှုံးတာလည်း မပြောနဲ့လေ။ သူ့သားတွေရဲ့ အပေါင်း အသင်းတွေတင် နည်းတာမှ မဟုတ်တာ။ ဧည့်ပရိသတ် တွေ စားစရာ ၊ သောက်စရာ စုံစေ့သွားတာ ကိုပဲ ကျေးဇူးတင် ရဦးမှာ။ ကျန်တဲ့ လက်ဖွဲ့ ဆိုတာကတော့ သူ့တုန်းကလည်း ကိုယ်က သွားနိုင်ထားမှ ဖြစ်တာလေ။
”မောင်ရေ…ဒီအထုပ်က ဆွေ့သူငယ်ချင်းရဲ့ အစ်မ အပျိုကြီးရဲ့ လက်ဖွဲ့ ထုပ်လေ။ သူက ပိုက်ဆံရှိ ဘောစိမကြီးပါ မောင်ရာ။ ဆွေ့ သူငယ်ချင်း နိုင်ငံခြား သွားနေ တာမို့ ဆွေတို့ပွဲကို သူကိုယ်တိုင် လာတာ။ မောင်နဲ့တောင် ဆွေ မိတ်ဆက်ပေး လိုက်ဘူးတယ်လေ။ အဝါရောင် ချိတ် ဝမ်းဆက်ဝတ်ထားတဲ့ ခပ်တောင့်တောင့် အမျိုး သမီးလေ မောင်ရာ”
”လိုရင်းကို မရောက်နိုင်တော့ ဘူး”ဆိုတဲ့ စကားစု ကိုတော့ ကျုပ် ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ပဲထားလို့ ကျုပ် ဇနီး ပြောသမျှတွေကို ခုတင်ပေါ် ကနေပဲ တုံးလုံး အနေအထားနဲ့ နားထောင်နေ လိုက်တော့တယ်။
”ဆွေကဖြင့် ဒီအမျိုးသမီး လက်ဖွဲ့မယ့် တန်ဖိုး မသေးလောက်ဘူး ထင်တာ ကြည့်စမ်းပါဦး မောင်ရယ်။ Tea Set ကြီး။ ဒါကြီးက ဘယ်လောက် တန်မှာမို့လဲ သာယာ ဝတီထုတ် Tea Set ကြီးလားတောင် မသိဘူး…ဟင်း”
မျက်စိက မြင်တာကို၊ လက်က အလိုက်သင့် ကိုင်ကြည့်ရင်း နှုတ်ဖျားက စက်သေနတ်နဲ့ ပစ်လွှတ်နေ သလို ဗလွတ်၊ ဗလွတ်ပြောနေတဲ့ ကျုပ်ဇနီးရယ်လေ။
”ဟင်…ကိုထူးအောင်တဲ့။ ဒါ မောင့်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းမို့လား။ ကြည့်စမ်းပါဦး။ သူ့ရဲ့ လက်ဖွဲ့ကို။ စောင်နှစ်ထည် တည်း လေ။ စောင် ဆိုတာတောင် စောင် မှ စောင်။ ဘုရားစူး အခါခါ ကျိန်ပြောမှပဲ ယုံရမယ့်ပုံ။ ဒီလောက် ကြမ်းထော်နေတဲ့ စောင်ကို ဘယ်လို သုံးရမှာတုံး။ ဝဲပေါက်တဲ့ အချိန်မှသာ ဝဲကိုပွတ်ဖို့ ခြုံအိပ်မှ ရ မယ်။ မောင့်သူငယ်ချင်း ကလည်း ပြောမပြောချင်တော့ဘူး။ ခိုင်သင်းကြည် စကား ခဏယူပြော ရရင် အံ့သြစရာ အံ့သြစရာ ”အံမယ်။ ကျုပ်ဇနီးက ပါးစပ်က ပွစိ၊ ပွစိ ပြောရုံ အားမရသေးဘဲ ကျုပ်သူငယ် ချင်းရဲ့လက်ဖွဲ့စောင်ကို ခပ်လှမ်း လှမ်းကိုတောင် ပစ်ပေါက် လိုက်သေးတယ်။ တစ်ထုပ် ဖြေလိုက် ပွစိ၊ ပွစိ ပြောလိုက် လုပ်နေ တဲ့ ကျုပ်ရဲ့ ဇနီးကို ကျုပ်ကြာတော့ သိပ်ပြီး စိတ်မရှည်ချင် လာတော့ဘူး။ ကျုပ်လည်း တစ်နေ့လုံး ပင်ပန်းထားတာမို့ တစ်ကိုယ်လုံး ညောင်းချည့် နေရုံမက မျက်လုံး တွေ လည်း မှေးစင်း နေပြီ။ မပြီးနိုင်တဲ့ ကျုပ်ဇနီးရဲ့စကားဝိုင်း ကနေ ရှောင် တိမ်းဖို့ ကျုပ်ကြိုးစား ကြည့်လိုက်တယ်။
”မင်း မအိပ်သေးဘူးလား ဆွေ ရာ။ တစ်နေ့လုံးလည်း ပင်ပန်းထား တဲ့ဟာကို မောင်တော့ အိပ်ချင်လာ ပြီ။ အိပ်တော့မယ်”
”အိပ် …အိပ် မောင်ပဲအိပ်။ ဆွေတော့ မအိပ်နိုင်သေးဘူး။ အံ့ ပါရဲ့။ မင်္ဂလာ သတို့သားတဲ့။ ဘယ်လို မင်္ဂလာ သတို့သားလဲ မသိဘူး။ ကိုယ့်ကို လက်ဖွဲ့ကြတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကို လည်း စိတ်မဝင်စား။ ဒီအထုပ်တွေ အကုန်လုံးကို ဝိုင်းဖောက် ကြည့်မယ် လို့လည်း စိတ်မကူး”
‘ဟမ်’ဆိုတဲ့ အာမေဍိတ်သံလေး ကို လည်ချောင်းဝက ထွက်မလာ အောင် တံတွေးလေးနဲ့ ‘ဂလု’ ခနဲ အသာ မျိုချလို့ ကျုပ်ဇနီး အသစ် စက်စက်လေးကို ကြည့်မိလိုက် တယ်။ ဒီစကားတွေကို ပြောနေတဲ့ မိန်းကလေးက ဒီနေ့မှ ကျုပ်လက်ထပ် လိုက်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ဟုတ်ပါလေစ။ သူ့ရဲ့ပြောဟန်၊ ဆိုဟန်တွေက ဝါရင့် အိမ်ထောင်ရှင် မကြီးလို ပွစိ၊ ပွစိနဲ့မပြီး နိုင်မစီးနိုင် အရီးကြိုင်လေ။ မျက်စောင်းတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပစ်လွှတ် နေလိုက်တာ များတောင် အဆစ်ပါသေး။ အလို.. မင်္ဂလာဆောင် ပြီးသွားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ မင်္ဂလာဦးညကို မဖြတ်ရသေးတဲ့ အပျိုစင်စစ် ဘဝမှာတောင် အံ့သြဖွယ်ရာ မိန်းမတစ်ယောက် ဘဝကို အပြောင်းလဲ ကြီး ပြောင်းလဲ ရောက်ရှိ သွားပါပကောလား။
ကျုပ်ကို ဘာမှ စိတ်မဝင်စား တတ်တဲ့လူ ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ မိန်းမမျက် စောင်းတွေ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ပစ်လွှတ်နေတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ အသစ်စက်စက် ဇနီးလေးကို ကျုပ်လည်း အံ့သြ မှင်တက်မှုတွေနဲ့ မျက်လုံး ခပ်ဝိုင်းဝိုင်း တွေနဲ့ကြည့်ပြီး ကျုပ်စောင်ကို ယူလို့ ခပ်မြန်မြန်ပဲ ခေါင်းမြီးဆွဲ ခြုံပစ်လိုက် တော့တယ်။ အဲဒီလို မလုပ်လို့လည်း မဖြစ်တော့ ဘူးလေ။
ကျုပ်မိန်းမကို ဒီအတိုင်းဆက် ကြည့်နေမိရင် ဒီနေ့ ကျုပ်ကြည့်မရတဲ့ လူစာရင်းမှာ နောက်ဆက်တွဲ စာရင်း အနေနဲ့ ကျုပ်မိန်းမက မဖြစ်မနေ ပါလာတော့မယ် ဆို တာ သေချာနေပြီ လို့ ကျုပ်ကိုယ် ကျုပ် သိလိုက်ပြီးပြီ မဟုတ်လားလေ။
yatimagazine (March, 2012)